Oversea တွင် အလုပ်လုပ်သူများ အောင်မြင်ရေးအတွက် လိုက်နာဖွယ် နည်းလမ်းများ. Some word are useful and funny ~ ITmanHOME
22:48 ကောင်းနိုးရာရာ No comments
Oversea တွင် အလုပ်လုပ်သူများ အောင်မြင်ရေးအတွက် လိုက်နာဖွယ် နည်းလမ်းများ. Some word are useful and funny
Oversea တွင် အလုပ်လုပ်သူများ အောင်မြင်ရေးအတွက် လိုက်နာဖွယ် နည်းလမ်းများ.....
Some word are useful and funny
၁) ရုံးချိန်ကို ၁စက္ကန့်မျှနောက်မကျပါစေနှင့်
ရုံးရောက်ပြီးမှ မိတ်ကပ်လိမ်း၊ မနက်စာစား၊ အီအီးပါ စသည်များလုပ်ပါ။
၂) နေ့လည်အိပ်ငိုက်လျင် အိမ်သာသို့ ချက်ချင်း ပြေးပြီးအိပ်ပါ။
၃) အလုပ်ပြောင်းလိုလျင် အနည်း ဆုံ: LV သို့ Gucci အိပ်တစ်လုံးဆောင်ထားပါ၊
TAKA မှ တစ်လုံးစိန် (အလုံးကြီးကြီး) လက်စွပ်ဝတ်နိုင်လျှင် ရာထူး မြင့်
ဘာမှ မတတ်ချင်နေ ထိုအသုံးဆောင် များနှင့် သစ်လွင်သော အ၀တ်အစားများ
၀တ်ပြီး အင်တာဗျူး လုပ်သူအား ရယ်မော၍ စကားပြောပါ။
(LV အိတ်ဈေးကြီး၍မ၀ယ်နိုင်သူများ မလေးရှား အတွင်အင်မတန်သေသပ်သော အတုရှိသည်။)
၄) အလုပ်ဝင်ပြီး၍ ဘာမှမလုပ်တတ်လျင် နီးစပ်ရာ သူဌေးတစ်ယောက်ထံ အမြန်ကပ်ပြီး
နှာခေါင်း သံဖြင့် စကားပြောပါ။ ရာထူးပါတက်မည်။ :P
၅) နာမကျန်းခွင့် MC ယူလိုလျှင် ကတိုးနှာရှုဆေးကို သူဌေးအလစ်တွင် ရှူ၍
သူဌေးရှေ့ တွင် ဟတ်ချိူး ခဏ ခဏ ချေပါလေ။ သူ သတိပြုမိ၍ မေးလျှင် မျက်နှာ
ညှိုးထားပြီး flu ဟုသာဖြေပါ။ ဖြေပြီး ၂ စက္ကန့် မှစ၍ အနည်း ဆုံး ခွင့်
(၃) ရက် ကို ငြိုငြင်မှုကင်းစွာဖြင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ (သတိ-
ဆေးခန်းများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ထားသော ရုံးမှ ၀န်ထမ်းများ ဒီနည်းမသုံးရ။
၆) ဒီအမှားက ငါလုပ်တာမဟုတ်ဘူး နင်လုပ်တာ ဆိုသော
ကိုယ်လုပ်တာမဟုတ်လင့်ကစား ဒီကိစ္စ ငါမသိလိုက်ဘူး ဒါပေမယ့် နောက်တခါ
ကျရင်သတိထားမှဖြစ်မယ် ဒီတစ်ကြိ်မ်တော့ ၀မ်းနည်းပါတယ် လို့ပြောလိုက်ပါ။
အခန့်သင့်လျှင် သင့် သူဌေးကျွေးသောနေ့လည်စာပါ စားရကိန်းရှိသည်။
ရ) သူဌေးနှင့် တွေ့လျှင် ရိုသေစွာ လမ်းဖယ်ပေးချင်း ကိုယ်ကို ကိုင်းညွှတ်၍
စကားပြောခြင်း မပြုလုပ်ရ။ (မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုများ မလိုအပ်ပါ)
သူဌေးအား သူ့ နာမည် သာခေါ်ပါ .... နာမည် ရှေ့တွင် ဟေ့ဘယ်သူ စသည်ဖြင့်
ခေါ်နိုင်သည်။ မလိုက်နာပါက ရာထူး မတက်သည့် အပြင် နင်းပြားပုံစံဖြင့်
ယုံကြည်စွာ ကျင့်သုံးကြည့်ပါ၊ လက်ရှိရာထူးတွင် မုချ ခိုင်မြဲမည့် အပြင်
credit Khin Ohnmar T